Fiparitahana zava-mahadomelina : fonosan-drongony saika omena ny mpianatra tratra tao amina sekoly lehibe iray | NewsMada
Fiparitahana zava-mahadomelina : fonosan-drongony saika omena ny mpianatra tratra tao amina sekoly lehibe iray
Somary nafenimpenina ny raharaha, kanefa fantatra fa nisy fonosan-drongony tratra tanaty “sachet” saika homena ny mpianatra tao amina sekoly lehibe iray eto an-dRenivohitra, ny alakamisy lasa teo. Araka ny vaovao voaray, afenin’ireto mpianatra ireto ny fidorahana ary misy efitra fanaovan’izy ireo izany mihitsy. Mpampianatra iray no fantatra fa naharaka ity hevi-dratsin’ireo mpianatra. Nametraka fitoriana izy ary nisy, noho izany, ny fanadihadiana natao mahakasika ity raharaha ity. Fantatra ihany koa fa misy zafikelina mpitondra ambony teo aloha tafiditra anatin’ireo mpidoroka ireo, ary izy io ihany aloha no tratra. Voalaza fa rongony avy any Toliara ireto tratra ireto.
Tsy vao izao no nisy ny mpanaparitaka rongony eny amin’ireny sekoly ireny. Misy hatrany ny andian’olona mivarotra rongony amin’ny mpianatra eto an-drenivohitra. Misy amin’ireny ny mpamatsy mpianatra, mivarotra amin’ny namany ilay mpianatra avy eo. Nisy fotoana nanao hetsika namongorana ireny olona ireny ny polisy, saingy miverimberina ny tranga.
Ohatra amin’izany ny fahatraran’ny polisy ny lehilahy iray 18 taona monina eny Andohatapenaka, ny 8 febroary teo, noho ny resaka fivarotana rongony. Io andro voalaza io, fiaraha-miasa tamin’ny fokontany 67 ha Nord Est, izay niantso ny polisy mpanao fisafoana no nahatratrarana ity tovolahy ity teny amin’iny faritra iny noho ny fihetsiny hafahafa sy kaodikaody. Nahatratrarana fonosana rongony 35 fonosana teny amin’ilay tovolahy nandritra ny fisavana azy.